Siyakhula i-hydrangeas kwi-flowerbed yethu. Imithetho yokutshintshwa, ukunakekelwa, ukuzaliswa kunye nokulawulwa kwezifo.
Ukunyuka kwama-hydrangea ekhaya
Indlela yokukhula kunye ne-hydrangeas ngokufanelekileyo? Ukufumanisa iimfihlelo
I-Hortensias ayixabiswanga nje ngeentyantyambo ezintle kunye neendidi ezahlukeneyo. Le shrub ixhepha kakhulu, kodwa ayifuni ukunakekelwa okhethekileyo. Imvakalelo ephawulekayo eyenzayo ekupheleni kwekwindla, xa kusentlangeni esele ikhona iintyatyambo, i-buds kunye neentloko eziboshwe ngeembewu. Ukongezelela, banamaqabunga amnyama omnyama omfanekiso ongaqhelekanga, oya kuhobisa ngokuqinisekileyo infield yakho.
Iintyatyambo nazo ziyinto engavamile. Ngokuxhomekeka kwiintlobo, i-inflorescences inokuyilwa ngendlela yebhola, isambulela, i-cone kunye ne-panicle. Umthunzi wabo awuxhomekeke kuphela kwiintlobo, kodwa nakwizinga lomhlaba. Kwihlabathi le-alkaline i-hydrangeas ivame ukuqhakaza ngeentyantyambo zepinki zee-shades ezahlukeneyo, kunye ne-asidi ye-asidi - eluhlaza okwesibhakabhaka.
Ukutshala ngokufanelekileyo nokunyamekela i-hydrangeas
Ukutyala isityalo kwindawo evulekile entwasahlobo okanye ukuwa. Ukuba kwindawo yokuhlala yakho ebusika ebusika, ke kungcono ukuyihluma entwasahlobo, ukuze kube yinyanga ezayo kubanda, isityalo sinexesha lokunyanelana nokukhula.
Umhlaba ngaphambi kokutyala kufuneka ukuba utyalwe ngamaminerali kunye nezichumiso eziphilayo. Kwimeko yokutshala, i-peat kufuneka ibekwe, kwaye iingcambu zezityalo kufuneka zifutshane.
Izityalo zingatyalwa ngamaqela, okanye enye ngenye, kuxhomekeke kwindlela yoyilo lweentyatyambo oyifunayo. Emva kokutyala umsila, kucetyiswa ukuba inqwelana encinane ye-humus okanye i-peat ibekwe kuyo.
Ukugqoka okuphezulu kunye nezichumisi kufuneka kwenziwe rhoqo, kodwa kungabi nzulu kakhulu, njengoko isichumiso esininzi siya kukhokelela kwientyantyambo ezinzulu, kwaye iziqu azikwazi ukumelana nokulingana kwezinto eziphambili.
Ziyabona ngokucacileyo iziqu zomquba: umquba kunye ne-humus.
Ukunisela ientyatyambo kufuneka kusebenze, kuba isityalo siyakuthanda umswakama. Kodwa qi ni sekise ukuba i-acidity yamanzi yokunkcenkceshela ayikho phezulu.
Izihlandlo ezithathu ngomzuzu umhlaba ojikeleze i-hydrangeas kufuneka ukhululeke ukukhupha ukhula kwaye vumela izimpande ziphefumule.
Iintyatyambo kufuneka zinqunywe. Kwizityalo zabantu abadala, ukususwa kwe-inflorescences ezingenasiphelo zenziwa ekwindla, kunye nabantwana entwasahlobo, xa bengakhululanga iinjongo. Ngokunquma kuma-hydrangeas, nokuba nomthi omncinci ungenziwa, ukuba yonke ixesha ikhuphe zonke iinjongo kwaye ishiye ubuninzi beentlobo ezine.
Indlela yokusasaza i-hydrangeas ngokuchanekileyo
Zininzi iindlela zokwandisa abantu baseHrrangea.
Kususela kwisithsaba somntu omdala, amagatsha amaninzi eluhlaza athatyathwa, aqale atyalwe kwi-extract, emva kokuvuna - kwibhedi ekhethekileyo kwi-greenhouse, apho baqeshwe khona kwiminyaka emibini okanye emibini, kwaye emva kokuba le mi hydrangeas ityalwe kwindawo evulekile.
Ngentwasahlobo okanye ekwindla, iibhokhwe ezinamandla zicatshulwa kwaye zahlula kwizityalo ezininzi ezizimeleyo. Qinisekisa ukuba yonke intsholongwane entsha inesifo.
Ukutshiza kuze kube ngumnyaka ongudala uguqulwe phantsi kwaye wangcwatywa kunye nomhlaba ukuze phezulu kweso sityalo kubonakala phantsi komhlaba. Ngomnyaka ozayo isityalo siya kuzuza iingcambu kwaye sinokutshintshwa kwindawo efanelekileyo.
Isifo esona sifo sisiguqu, i-powdery mildew, izifo zefungal kunye ne-virus ye-hydrangea. Qinisekisa ukuba isityalo sakho siyagula, siya kunceda amabala amnyama kumaqabunga kunye neentyantyambo.
Phakathi kwezinambuzane zama-hydrangeas, ama-apidi, izilwanyana zesicabucabu kunye nezilwanyana zesicabungulu zinomdla kakhulu. Kuzo zonke iimeko i-hydrangeas iphathwa ngeendlela eziqhelekileyo ezisetyenziselwa ukulawula inkathazo ethile okanye izifo.
Indlela yokwenza i-hydrangea iqhakaze?
Ukunyamekela igadi le-hydrangea: imithetho esemiselweyo
Kuphi ukuthenga imbewu ye-tabernemontanang sanango?
Kosmeya - ukutyala nokukhula
Izityalo ezingaphakathi: syngonium
Isityalo esiluncedo kakhulu
I-Gimnokalitsium - i-cactus yaseJapan
I-Begonia ubuhle bezotrophu
Ikhalenda ye-Lunar yee-houseplants 2016. Iintsuku ezithandekayo nezingalunganga
Kutheni i-dizzy and nauseous
Isipho kumyeni wakhe ngoFebruwari 23
Ukunyamekela iimpahla zezingane
Izibini ezilungileyo kakhulu zaseRashiya zibonisa ishishini
Unyaka omtsha kwi-ski resort
Iipropati kunye nokusetyenziswa kweoli yamafutha omnyama
Iklabishi echitshiweyo ngenyama yokutshaya
Iimvini ze-oven e-microwave
Indlela yokwenza: ingaba ungumhlobo omhle
Kunokuba ukubhema kuyingozi ngexesha lokukhulelwa
Ukuzalwa komntwana kubalulekile ixesha
I-oksijeni yokutya kubantwana
Indlela yokuphumelela intliziyo yentlanzi yindoda